आमाको नाममा कलंक : आफ्नै छोरीलाई कोठामा थुनेर आफ्ना केटासाथीसँग यौनसम्पर्क - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
घर प्रदेश नं १ आमाको नाममा कलंक : आफ्नै छोरीलाई कोठामा थुनेर आफ्ना केटासाथीसँग यौनसम्पर्क
आमाको नाममा कलंक : आफ्नै छोरीलाई कोठामा थुनेर आफ्ना केटासाथीसँग यौनसम्पर्क
१२ बैशाख २०७८, आईतवार ११:२९
विराटनगर । आमाको शब्द नै ओझिलो छ । त्यो ओझिलो शब्दलाई पछिल्लो समयमा बोझिलो बनाउने काम पनि आमाहरुबाट हुँदै आएका छन् । आफूले दुःख र कष्टका साथ हुर्काएका छोराछोरीप्रति गरिने विभेद, आचारण, व्यवहारका शैली एकातिर छँदै थिए भने अर्कोतिर तिनै आमाले आफूले जन्मएर हुर्काएकी छोरीलाई परपुरुष लगाएर करणीको प्रयासमा लाग्छन भन्ने सुन्दा आमा शब्दमै भेटिने त्यो न्यानोपन कता कता हराउँदै गएको अनुभुत हुने गरेको छ ।
उच्च सम्मानका लागि संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता आमा र पवित्र सम्बोधन पनि आमा भगवानको सक्षात रुपमा पुजा गर्ने गरिन्छ । तिनै आमा जसले हामीलाई संसार देखाइन्, गर्भमा राखेर पीडा सहिन् र काखमा राखेर पालन पोषण गरिन्। सबैभन्दा बढी करुणा र माया बोक्ने आमा जसले बाल्यकालका हरेक इच्छा पुरा गराएर हुर्काइन तिनै आमाले आफ्नै छोरी मार्नेदेखि बलात्कार गराउनेसम्मका काम गर्दा त्यो भगवानको रुपमा रहेको पवित्र नाता कर्त राक्षसी प्रवृत्तिमा परिणत भएको हो कि भन्ने आभाष यस्ता घटनाबाट हुँदै आएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १० मा यस्तै एक आमाले आमाको त्यो महिमा र सम्मान खस्कँने काम गरेकी छन् । मन्जु पौडेल नाम गरेकी महिलाले आफुले पूर्व पतिबाट जन्मएकी २२ वर्षीया छोरीलाई आमा भेट्न आएको बेला बन्धक बनाई परपुरुष भेला गरी जबरजस्ती करणी गराउन खोजेको घटना बाहिरिएको छ । छोरीलाई कोठामा थुनेर आफ्नै केटासाथीहरुलाई जबरजस्ती यौनसम्बन्ध कायम गराउन लगाएकी आमा चाहि किन राक्षसी बनिन् ? अब पनि तिनलाई आमा भनेर पुकार गर्ने ? यद्यपि उनकै छोरा अर्थात सौतेनी भाईले ढोका खोलेर उचार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पीडित युवतीलाई उजुरी दिन लगाएका छन् ।
पीडित युवतीले आमा पौडेल, सुनसरीको इनरुवा–९ बवियाका अजय साहु र विराटनगर १० शान्ति टोलका सुरज रायविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएकी हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले छानबिनपछि तीनै जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा शरिर बन्धक तथा जबरजस्ती मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
उक्त मुद्दामा अदालतले कोरोनाको कारण देखाउँदै पौडेल र अजयलाई १र१ लाख र सुरजलाई ५० हजार धरौटीमा छाडेको छ । उक्त मुद्दामा पौडेललाई जोगाउन अहिले यहाँका राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरु लागिपरेको पीडितले गुनासो पोखेकी छन् ।
घटनाको सुत्रपात यसरी भएको थियो ?
ठेक्केदार भगतले पौडेलको नाममा विराटनगर–१० मा घरजग्गाका साथै अन्य ठाउँमा पनि १० करोड बढीको सम्पत्ति जोडिदिएका छन् । भगतले सासूआमा ताराको नाममा पनि सुनसरीमा जग्गा खरिद गरिदिएका छन् ।
सुनसरीको भण्टाबारी माइती भएकी पौडेलको तरहराका एक युवकसँग विवाह भएको र एक छोरी पनि जन्मेकी थिइन् ।
आमा ताराले भण्टाबारीमा सञ्चालन गर्दै आएको मदिरा पसलमा बस्दै आएकी पौडेलको कोशी परियोजनाका ठेक्केदार भारतको वीरपुरका बब्लु भगतसँग प्रेम बस्यो । उक्त प्रेम १५ वर्ष अघि विवाहमा परिणत भएर चार छोरा र एक छोरी पनि भयो ।
तरहरामा जन्मेकी छोरीलाई बुबासँगै छोडेर पौडेलले भगतसँग विवाह गरे पनि छोरीसँग भेटघाट हुँदै आएको थियो । भगतसँग प्रेममा बस्दा एक सन्तान जन्मेपछि भगतले कानुनी रुपमा श्रीमती स्वीकार गरेका थिए ।
भगत काम विशेषले घर बाहिर भएका बेला पौडेलले केटा साथीहरुलाई घरमा बोलाएर जाँड रक्सी खाने र पार्टी गर्दै आएकी थिइन् । जसमध्ये केही केटा साथीसँग उनले यौन सम्बन्ध पनि कायम राखेको विषय टोल छिमेकमा फैलिएको थियो ।
त्यसपछि भगतले यी यस्ता कार्य नगर्न सम्झाउँदा ती केटासँग पौडेल जाने क्रमसमेत सुरु भयो । तर पौडेलका परिवारजनका साथै भगतले ५ छोराछोरीको मायाले पौडेललाई खोजेर ल्याई घरमा राखेको परिवारजनले बताए ।
घरमा बस्दै आएकी पौडेलको पछिल्लो समय अजय र सुरजसँग सम्बन्ध गाँसिएको थियो । भगतले अजय र सुरजसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी पाएपछि समस्या हुने डरले पौडेलले पूर्व पतिस“ग भएको छोरीको विवाह अजयसँग गराइदिने प्रस्ताव राखिन् ।
तर छोरीले नमानेपछि अपहरण गरेर बन्धक बनाई जबरजस्ती अजयसँग यौनसम्बन्ध कायम गराउने षडयन्त्र रचेको पीडितले सुनाइन् ।
रहराबाट पीडित युवती आमालाई विराटनगर भेट्न आएको बेला पौडेल, अजय र सुरजले पार्टी आयोजना गरेरसँगै जाँड रक्सी खाए ।
रक्सीको मात लागेपछि पौडेलले छोरी र अजयलाई कोठामा थुनेर बाहिरबाट ताल्चा लगाइदिइन् । पीडित युवतीले रोई कराई गरेको सुनेर भगत पक्षका पौडेलकै एक छोराले कोठाको ताल्चा खोलेर उद्धार गरेका थिए ।
उक्त घटनाको बारेमा भगतलाई समेत जानकारी भयो । त्यसपछि पीडित युवतीले सौतेनी बुबाको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् ।
छोरी माथि जवरजस्ती करणीको प्रयास असफल भएपछि पौडेल एक्कासी त्यहीदिन श्री एयरलाइन्सको विमानबाट काठमाडौं फरार भइन् ।
पौडेलले कसैलाई भने कहिले आउन नदिने, ज्यान मार्ने, भिडियो सार्वजनिक गरिदने भन्दै धम्काएकी थिइन् ।
पौडले छोरीलाई घरमा छोडेर भागेपछि आमाको करतुत बाहिर आएको हो । धिमेकीले श्रीमानलाई सुनाउदा छोरीले आँट गरेर आमा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन् ।
अघिल्लो लेखमाशुन्यमा पुगेको १ नम्बर प्रदेशको कोरोना संक्रमण पुनः बढ्दै, शनिबार १३६ जना संक्रमित फेला
अर्को लेखमाप्रकृति ढाल्ने, मानिस ठड्याउने : काठमाडौंको धरहरा